Nosy Seychelles dia miantso mpiasa lavitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Nosy Seychelles dia miantso mpiasa lavitra
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • Seychelles Madagascar Malgache • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny Nosy Seychelles dia manasa ireo mpitsidika erak'izao tontolo izao hipetraka eo amin'ny zorony kely amin'ny paradisa amin'ny alàlan'ny programa Workcation Retreat Program - fifangaroana asa sy fialan-tsasatra amin'ny fitsangatsanganana tropikaly.
Ny birao an-trano dia nanjary fomba vaovao ho an'ny mpiasa marobe erak'izao tontolo izao.
Hatramin'ny areti-mandringana COVID-19 dia nesorina ny faniriana handositra ny fiainana andavan'andro ary hiasa amin'ny toerana paradisa.
Ny programa vaovao Seychelles dia misokatra ho an'ireo tompona pasipaoro manan-kery rehetra ary mirakitra serivisy isan-karazany izay manohana ny asa lavitra.
Ity programa ity dia mitaona ny mpiasa lavitra miaraka amin'ny tolotra tsy hay tohaina hamindra ny biraon'izy ireo any amin'ny nosy alehany mba hitsoahana maharitra lavitra ny fahasahiranana eto an-tany, ny faniriana izay nirongatra hatramin'ny nisian'ny areti-mandringana.
Ny mpitsidika dia afaka miaina sy miasa amin'ny toerana tropikaly mandritra ny herintaona farafahakeliny. Marihina fa ny mpitsidika fotsiny izay manana orinasa sy loharanom-bola ivelan'ny Seychelles, no ho mendrika amin'ny programa.